Ikratshi kunye nomkhethe ngoJane Austen | Uncwadi lwangoku
Ekuqaleni kwenkulungwane ye-XNUMX, ukubhala malunga nenkululeko yabasetyhini kunye nokusondela kwiingxaki zabo zothando ngendlela ehlekisayo yayingeyona nto iqhelekileyo. Ngapha koko, imachismo yaqhubeka ukubakho kuyo yonke imimandla yoluntu, kubandakanya nehlabathi loncwadi. Kuthathelwa ingqalelo njengenye yeenoveli zokuqala zobufazi kwimbali, Ukuziphakamisa kunye noKhetho nguJane Austen Enye yeeklasiki ezifanele ukufundwa kube kanye ebomini bakho.
1 Isishwankathelo soKratshi kunye noKhethe
2 Ikratshi kunye nokucalula abalinganiswa
2.1 Obona balinganiswa
2.2 Abalinganiswa besekondari
3 Ukuzikhukhumeza kunye noKhetho: Isiganeko esibalulekileyo kwimbali yoncwadi
Isishwankathelo soKratshi kunye noKhethe
Beka kwiindawo ezisemaphandleni zesiNgesi, kude lee neLondon ubomi bosapho lakwaBennet kunye neentombi zabo ezintlanu Ukutshata, bonke phakathi kweminyaka eli-15 ukuya kwengama-23 ubudala: uJane, oyena mdala, uElizabeth, uMary, uCatherine noLydia. Abantu abahlanu abancinci umama wabo, uNkosk. Bennet, ulangazelela oyena mntu uza kumkhokela njengeyona ndlela yokuphuma kwimeko ebekwe kwilifa losapho eliza kuzalwa lilifa ngumzala weentombi zakhe, uWilliam Collins, emva kokubhubha kuka Mnu. Bennet.
Kubo bonke oodade, U-Elizabeth ngoyena ufumana uzuko olukhulu ukuba ngumfazi omncinci ozimeleyo, okwathandwayo nguCharles Bingsley, isityebi esityebileyo awadibana naso kwitheko apho noElizabeth naye Dibana noMnumzana Fitzwilliam Darcy, usozigidi ongavumiyo ukucela uElizabethe ukuba adanise ngenxa yokuba engamjongi emhle kakhulu. Iinkcukacha ezifunyanwa ngumlinganiswa ophambili ngokuzingca okuthile, imvakalelo eya kuhamba naye ngexesha lebali apho ahlangana khona noMnumzana uDarcy bavusa umtsalane omkhulu, ophazanyiswa ngokuchanekileyo likratshi kunye nocalucalulo oluvuke phakathi kwabo.
Ibali lothando likwaphawulwe ngekamva loodade abahlukeneyo baseBennet kunye nesidingo sabo sokutshata indoda enokubanika ikamva elingcono, elihlala libonakala lithembisa ngakumbi xa indoda enemali ikulungele ukuqala iprojekthi.
Ikratshi kunye nokucalula abalinganiswa
U-Elizabeth bennet: i Ikratshi kunye noKhethe umlinganiswa ophambili Ungowesibini koodade abahlanu. Intombazana eneminyaka engamashumi amabini ubudala ebonisa ukusuka kumzuzu wokuqala uthotho lwamakhubalo angadibaniyo nomzekelo wendlela yomfazi othobekileyo nothobelayo wexesha: uyile kwaye ulumkile, uzimele, kwaye unomdla omkhulu. Soloko ekhokelwa luvo olungaqondakaliyo olusetyenziswe kumntu ngamnye nakwisigqeba adibana naso, ilizwe likaElizabeth liyatshintsha ngokupheleleyo xa edibana noMnumzana Darcy.
UFitzwilliam Darcy: Indoda ephambili kwinoveli iqala njengothando lwesibini lukaElizabethe, ukuba ngumlingiswa otyholwa "likratshi kunye nokucalula" okufihlakeleyo kuwo wonke umsebenzi. Ubukrelekrele kwaye usisityebi, kodwa uneentloni ngandlela ithile - umgangatho ofihliweyo phantsi kwekratshi elithile- Mnumzana uDarcy umjonga uElizabeth njengoluntu oluphantsi kwaye akangomtsalane njengabanye oodade wabo. Nangona kunjalo, njengoko umdlalo uqhubeka, UMnu.Darcy uyaqonda ukuba uninzi lwabantu abamngqongileyo basondela kuye ngaphandle komdla, uElizabethe kuphela kwakhe ombona ngamehlo ahlukileyo.
UMnu Bennet: usolusapho wosapho ungumnini welifa elinxulunyaniswe nenye inzala yosapho, uMnu. Collins. Ulungile kwaye ucocekile, uziva enamathele ngakumbi kwiintombi zakhe ezindala, uJane noElizabeth.
UNksk Bennet: Isichasi somyeni wakhe ngumfazi ohlebayo kwaye ongenalwazi onemizamo emiselweyo yokufumana oyena mlingisi mhle kwiintombi zakhe.
UJane bennetOmdala koodadewabo baseBennet uneentloni kwaye akanamava, engoyena mntu uthandwayo nguCharles Bingley, owayenomdla kudadewabo uElizabeth.
UMary bennet: Inobuzaza kwaye igxeka, ungoyena mncinci udade, omnika isimilo sentombazana ekrakra.
UCatherine BennetEbizwa ngokuba ngu "Kitty" ngoodadewabo, ulilize kwaye uthanda izinto eziphathekayo, njengodadewabo omncinci, onempembelelo kuye.
ULidiya bennet: Omncinci koodade liqabane elithembekileyo likaCatherine kunye nebhinqa eliselula elinenkani nelingxamisekileyo, kunye nokudlala ngothando. Ugqibela ethetha kunye noMnu Wickham, ebangela ihlazo elisonjululwe xa uWickham evuma ukumtshata ukuze atshade nomtshato ohlawulelweyo.
UCharles bingleys: Umhlobo osenyongweni kaMnu.Darcy sisichasi esipheleleyo soku. Unobubele kwaye usozigidi, uziva ekhululekile kuye wonke umntu, noJane Bennet engowasetyhini awela kuye.
Ikratshi nomkhetheImbalasane kwimbali yoncwadi
Ngo-1813, unyaka wokupapashwa kwe-Pride and Prejudice, ubudlelwane phakathi kwamadoda nabasetyhini buqhubekile busekwe kwimo yentlalo apho indoda yayiphethe khona kwaye umfazi wanyanzelwa ukuba afumane kuye indlela yokuphuma ebomini Izinto ezintsha ezimangazayo, impilo-ntle kunye nokhuseleko.
Imeko endandisazi ngokupheleleyo oneminyaka engama-20 ubudala ogama linguJane Austen, apho udadewabo abelana kwigumbi elinye kwaye wabhala kwiincwadana zokubhala kwakhe ngento ayibonileyo emiselwe yona. Emva kokubhalwa kwencwadi yokuqala ebizwa ngokuba yiFirst Impressions, utata ka-Austen wazama ukuyiveza kumshicileli, eyaliwa de yanikezelwa kumshicileli owayekhe wapapasha omnye umsebenzi waseAusten, uSense kunye noVavanyo.
Ekugqibeleni, Ukuziphakamisa kunye noKhetho kwapapashwa ngoJanuwari 28, 1813 ukuba yimpumelelo yexesha kodwa, ngakumbi, umsebenzi ongapheliyo.
Isantya se-agile somdlalo, isatire yentlalo egalelwe ngu-Austen okanye, ngakumbi, Ukuqhekeka kwinqanaba lomxholo webali ngalinye lothando olonakaliswe ngumdlalo weqonga kunye nezinto ezibonakalayo zezinye zezizathu zokuba umsebenzi unyamezele, zikwakhona icon yabasetyhini.
Kungenxa yokuba nangona uncwadi lwangoku luzele ngamaqhawekazi amakhulu kunye neenjongo zokulingana, ngo-1813 inyani yayihlukile, uElizabeth Bennet wayengowesifazane owayezakufika abonise ukuba abantu basetyhini banokucinga. Ukuze baphinde bacinge ukuba le ndoda yayingumyeni ofanelekileyo na okanye hayi, okanye bamkele nje ukuba ubomi babo abuxhomekekanga kuphela kukhuseleko lwelungu lendoda ukuze bonwabe.
Ngaba ufunde Ikratshi nomkhethe kaJane Austen?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Ukuziphakamisa kunye noKhetho nguJane Austen